အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးလိုပါသလား (၃) | ABC Radio Australia
အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးလိုပါသလား (၃)
အထွေထွေ အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာရန် - Radio Australia and AMES
Lesson4of 14ပြောင်းရန်
'look' ​ဒါမှမဟုတ် ​'see' ​တို့ရဲ့ ​အသုံးပြုပုံနဲ့ ​ပတ်သက်ပြီး ​မရှင်းမလင်း ​ဖြစ်နေပါသလား။ ​ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ​မသဲမကွဲ ​ဖြစ်နေတာ ​မဟုတ်ပါဘူး။ ​ဒါကြောင့်လည်း ​ဖေ့စ်ဘွတ်ကနေတဆင့်
မေးခွန်းတွေ ​မေးမြန်းလာတာတွေ ​ရှိသလို ​တခြားမေးခွန်းတွေလည်း ​မေးလာတဲ့အတွက် ​ဒီနေရာမှာ ​ပြန်လည်ဖြေကြား ​ပေးထားပါတယ်။
နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံက ​Enone ​M ​Egaji ​က ​'look' ​နဲ့ ​'see' ​တို့ရဲ့ ​ကွာခြားပုံ ​ပြီးတော့ ​'complete' ​နဲ့ ​'finish' ​တို့ရဲ့ ​ကွာခြားပုံကို ​ရှင်းပြဖို့ ​မေးလာပါတယ်။
'see' ​ရဲ့ ​အဓိပ္ပာယ်ကတော့ ​'မြင်တွေ့ရခြင်း' ​ပဲ ​ဖြစ်ပါတယ်။
တခုခုကို ​မြင်ရအောင် ​တကူးတက ​ရှာဖွေတာ ​မဟုတ်ပဲ ​မျက်စိကို ​ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ ​မြင်ရသမျှ ​အရာအားလုံးကို ​'see' ​လို့ ​သုံးနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ​တခုခုကို ​မြင်ရအောင် ​တမင်တကာ ​ရှာဖွေပြီး ​တွေ့အောင် ​လုပ်ရတယ်ဆိုရင်တော့ ​'look' ​ကို ​သုံးရမှာ ​ဖြစ်ပါတယ်။ ​ဥပမာ- ​Children ​spend ​too ​much ​time ​looking ​at ​screens. ​လို့ပြောရင် ​'ကလေးတွေက ​ဖန်သားပြင်တွေကို ​ကြည့်ပြီး ​အချိန်ဖြုန်းနေကြတယ်' ​လို့ ​ပြောတာ ​ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးတွေဟာ ​မျက်လုံးဖွင့်တာနဲ့ ​ဖန်သားပြင်ကို ​တွေ့ရတာမဟုတ်ပဲ ​တမင်တကာ ​ကွန်ပြူတာ၊ ​ရုပ်မြင်သံကြားရှေ့မှာ ​နေမှပဲ ​မြင်ရတဲ့အတွက် ​'look' ​လို့ ​သုံးသွားတာ ​ဖြစ်ပါတယ်။
'Finish' ​နဲ့ ​'complete' ​တို့ကတော့ ​အဓိပ္ပာယ် ​အတူတူပါပဲ။ ​'ပြီးဆုံး ​ပြည့်စုံခြင်း' ​လို့ ​အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံက ​Muhammadh ​Sheshan ​ကလည်း ​‘forgotten’ ​ဆိုတဲ့ ​စကားလုံးကို ​ဘယ်လို ​သုံးရမလဲလို့ ​မေးလာပါတယ်။
'forgetten' ​ဆိုတဲ့ ​စကားလုံးကို ​have, ​has, ​is ​, ​was, ​am, ​are ​, ​be ​စတဲ့ ​ကြိယာတွေနဲ့ ​တွဲသုံးလေ့ရှိပါတယ်။ ​'မေ့သွားတယ်' ​လို့ ​အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ ​'forget' ​ရဲ့ ​past ​particple ​(verb ​3) ​ပဲ ​ဖြစ်ပါတယ်။ ​ပစ္စုပန် ​ပြ ​ကြိယာက ​forget ​ဖြစ်ပြီး ​အတိတ်ပြ ​ကြိယာက ​forgot ​ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ ​- ​Don't ​forget ​to ​lock ​the ​door. ​လို့ပြောရင် ​'တံခါး ​ပိတ်ခဲ့ဖို့ ​မမေ့နဲ့နော်' ​လို့ ​ပြောတာ ​ဖြစ်ပါတယ်။
အတိတ်က ​ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ​ကိစ္စကိုတော့ ​အခုလို ​ပြောနိုင်ပါတယ်။
I ​forgot ​to ​lock ​the ​door. ​'ကျနော်၊ ​ကျမ ​တံခါး ​ပိတ်ဖို့ ​မေ့သွားခဲ့တယ်။' ​
forgotten ​ဆိုတဲ့ ​verb ​3 ​အတွက် ​အခုလို ​သုံးနိုင်ပါတယ်။
I ​have ​forgotten ​most ​of ​the ​maths ​I ​learned ​at ​school. ​'ကျနော်/ ​ကျမ ​ကျောင်းတုန်းက ​လေ့လာခဲ့တဲ့ ​သင်္ချာ ​တော်တော်များများကို ​မေ့သွားပြီ။'
Azerbaijan ​နိုင်ငံက ​Ebulfez ​Abdullasoy ​ကလည်း ​attend ​နဲ့ ​participate ​တို့ရဲ့ ​ခြားနားပုံ ​အကြောင်း ​မေးလာပါတယ်။
'attend' ​နဲ့ ​'participate' ​တို့ရဲ့ ​အဓိပ္ပာယ်က ​ခပ်ဆင်ဆင် ​ဖြစ်နေပေမယ့် ​ကွဲပြားခြားနားမှု ​ရှိပါတယ်။
ပွဲလမ်းသဘင် ​တခုခုကို ​သွားရောက်တာက ​'attend' ​ဖြစ်ပြီး ​အဲဒီပွဲမှာ ​တခုခု ​အင်တိုက်အားတိုက် ​ပါဝင်တယ်ဆိုရင်တော့ ​'participate'လုပ်တာ ​ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ- ​I ​attended ​the ​wedding ​and ​participated ​by ​giving ​a ​speech ​about ​the ​bride. ​လို့ပြောရင် ​'ကျနော်/ ​ကျမ ​အဲဒီ ​မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကို ​တက်ရောက်ပြီး ​သတို့သမီးအကြောင်း ​မင်္ဂလာစကား ​တက်ရောက်ပြောကြားခဲ့တယ်။' ​လို့ ​ပြောတာ ​ဖြစ်ပါတယ်။
Rocky ​Jordan ​ဆိုတဲ့ ​ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ ​volume, ​sound, ​voice ​နဲ့ ​audio ​တို့ရဲ့ ​ခြားနားမှုအကြောင်း ​ပြောပြဖို့ ​မေးလာပါတယ်။
'Volume' ​ဆိုတာကတော့ ​အသံ ​တစ်ခုရဲ့ ​အနိမ့် ​အမြင့် ​ပဲ ​ဖြစ်ပါတယ်။
'Turn ​the ​volume ​down.' ​လို့ပြောရင် ​' ​အသံလျှော့ဦး' ​လို့ ​ပြောတာ ​ဖြစ်ပါတယ်။ ​
'Sound' ​ကတော့ ​အသံမှန်သမျှကို ​ပြောတာ ​ဖြစ်ပါတယ်။
'What ​was ​that ​sound?' ​လို့ပြောရင် ​'အဲဒါက ​ဘာအသံကြီးလဲ။' ​လို့ ​ပြောတာ ​ဖြစ်ပါတယ်။ ​
'voice' ​ကတော့ ​စကားပြောသံ၊ ​သီချင်းဆိုသံ ​ကို ​ပြောတာ ​ဖြစ်ပါတယ်။
'She ​has ​a ​lovely ​voice.' ​လို့ပြောရင် ​'သူ့အသံက ​အရမ်းချိုသာတာပဲ' ​လို့ ​ပြောတာ ​ဖြစ်ပါတယ်။
'Audio' ​ကတော့ ​လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေကနေ ​ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ​အသံတွေ ​ဖြစ်ပါတယ်။
'The ​audio ​quality ​on ​this ​TV ​is ​awful'. ​လို့ပြောရင် ​'ဒီရုပ်မြင်သံကြားကနေ ​ထွက်လာတဲ့ ​အသံအရည်အသွေးက ​သိပ်ညံ့တာပဲ။' ​လို့ ​ပြောတာ ​ဖြစ်ပါတယ်။ ​
အိန္ဒိယနိုင်ငံက ​Kamaal ​Sidd ​က ​likely ​နဲ့ ​possible ​တို့ရဲ့ ​ခြားနားမှုအကြောင်း ​မေးထားပါတယ်။
possible ​နဲ့ ​likely ​တို့ရဲ့ ​အဓိပ္ပာယ်က ​ခပ်ဆင်ဆင် ​ဖြစ်နေပြီး ​'ဖြစ်နိုင်ခြေ ​ရှိတယ်' ​လို့ ​အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။
ဥပမာ ​'လပေါ်ကို ​သွားမယ့်ကိစ္စဟာ ​ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပေမယ့် ​အဲဒီကို ​သွားမယ့် ​အနေအထားတော့ ​မရှိဘူး။' ​လို့ ​ပြောချင်ရင်တော့ ​It's ​possible ​to ​go ​to ​the ​Moon. ​But ​it's ​not ​likely ​that ​you ​will ​go ​there. ​လို့ ​ပြောနိုင်ပါတယ်။
အိန္ဒိယ ​နိုင်ငံက ​Aarti ​Sharma ​ကလည်း ​အင်္ဂလိပ် ​စကားမှာ ​'Get' ​ဆိုတဲ့ ​စကားလုံးကို ​ဘာလို့ ​အများကြီး ​အသုံးပြုသလဲလို့ ​မေးလာပါတယ်။
'get' ​ကို ​အသုံးများရတဲ့ ​အကြောင်းရင်းကတော့ ​'get' ​မှာ ​အဓိပ္ပာယ် ​အများအပြားရှိပြီး ​အသုံးလဲ ​တည့်တဲ့အတွက် ​ဖြစ်ပါတယ်။
'get' ​ရဲ့ ​အဓိပ္ပာယ်ကတော့ ​'တခုခုကို ​ရရှိခြင်း၊ ​ရနိုင်ခြင်း' ​ပဲ ​ဖြစ်ပါတယ်။
'Why ​does ​he ​get ​more ​than ​me?' ​လို့ပြောရင် ​'သူက ​ဘာဖြစ်လို့ ​ကျနော်/ ​ကျမ ​ထက် ​ပိုရနေတာလဲ။' ​လို့ ​ပြောတာ ​ဖြစ်ပါတယ်။
'Do ​you ​get ​it?' ​လို့ ​ပြောရင်တော့ ​'ရှင်နားလည်လား၊ ​သဘောပေါက်လား။' ​လို့ ​ပြေတာ ​ဖြစ်ပါတယ်။
'get' ​ဆိုတာ ​irregular ​verb ​ဖြစ်ပြီး ​past ​tense ​နဲ့ ​past ​participle ​ကတော့ ​'got' ​ပဲ ​ဖြစ်ပါတယ်။ ​တခါတလေကျတော့လည်း ​နေ့စဉ်သုံး ​အင်္ဂလိပ်စာမှာ ​past ​participle ​ကို ​'gotten' ​အဖြစ်လည်း ​အသုံးပြု ​ကြပါတယ်။